Technology – နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ – MHD – Modular Solutions
၁။ “Modular Building™” စာမျက်နှာ
၁။ “Modular Pro™” စာမျက်နှာ
၁။ “Modular Home™” စာမျက်နှာ
စက်ရုံတွင်တည်ဆောက်သော အဆောက်အဦးတိုင်းသည် ဥရောပမှ အင်ဂျင်နီယာများ၏ ထိန်းချုပ်မှုလက်အောက်တွင်ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုပြီးမှ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ စိတ်မှန်းနှင့်လုပ်ကိုင်ခြင်းအား လုံး၀ခွင့်မပြုထားပါ။ ထိုမှသာလျှင်ဝယ်သူအား အလုံးစုံ စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
နည်းပညာရှာဖွေရေးနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အချိန်မြောက်မြားစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးခံနိုင်မည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအားစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ကွန်တိန်နာ၏ Corten စတီး နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသော အရည်အသွေးမြင့် သုတ်ဆေးများက အကြမ်းတမ်းဆုံးရာသီဥတုဒဏ်အား ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
မြန်ဆန်သောသယ်ယူပို့ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တန်အောင် ထိရောက်ခြင်း
သင်၏လုပ်ငန်းတွေနောက်ကျနေပါသလား? လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုရန် အားသန်နေပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့၏ modules များသည် စက်ရုံတွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သော အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပုံမှန်သမာရိုးကျ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ချိန်၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ကာလမျှသာကြာမြင့်ပါသည်။
သင်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အားစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်ပါက အရည်အသွေးမပြည့်မှီခြင်း၊ ထပ်တိုးကုန်ကျစရိတ်များတက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိအလုပ်သမားများအား စီမံခန့်ခွဲရခြင်း နှင့် တစ်ခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများအားမေ့ထားလိုက်ပြီး အချိန်မှီပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်သက်သာစွာနှင့် အားကိုးယုံကြည်လိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ modules များသည် ပုံမှန် ရေကြောင်းသုံး ကွန်တိန်နာ အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် သမာရိုးကျ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများနှင့် လွယ်လင့်တကူ သယ်ယူ၍ ရပါသည်။ တပ်ဆင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်ရွေ့ပြောင်းနေရာချထားခြင်းများကလည်း : ပို့ဆောင်- မတင်- အောက်ခံရှိပြီးတုံးပေါ်တင်- အသုံးပြုစသော တသတ်မတ်တည်းနည်းလမ်းများသာဖြစ်ပါသည်။
ခွင့်ပြုထားသော ယာယီအဆောက်အအုံ ဥပဒေအပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်နိုင်သလို မူလအတိုင်းထားရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပို၍ကြီးမားသော အဆောက်အဦးပင်ဖြစ်စေ အလျှင်အမြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်သောကြောင့် ပုံမှန်အဆောက်အဦးမှပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသော အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြုပြင်ပြောင်းလဲရလွယ်ကူမှုအား ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ပြောင်းရွေ့ရတိုင်း အဆောက်အအုံတန်ဖိုးကို မဆုံးရှုံးပါစေနှင့်။
တိုးချဲ့၍ရသော Modular ဗိသုကာပညာ
နောက်ပိုင်းတွင်ထပ်မံတိုးချဲ့ ၍ရသော စနစ်သည် ပုံမှန်ဆောက်လုပ်ရေးတွေနဲ့ မတူညီစေသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုများလာသည်ဖြစ်ဖြစ် စီးပွါးရေးချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်ဖြစ် ထပ်တိုးနေရာလိုအပ်လာသောအခါတွင် Module များထပ်ပေါင်းကာနေရာချဲ့၍ရပါသည်။ နောက်ထပ်ရွေ့ပြောင်းရေးအတွက်ခေါင်းခဲစရာမလိုတော့ပါ။
လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်၍ လက်ရှိအဆောက်အဦးအပေါ်သို့ ၃ ထပ်အထိ ထပ်မံတင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မပါလုနီးပါးဖြစ်သောကြောင့် သင်ပိုင်ဆိုင်သောမြေနေရာ မူလအတိုင်းအရာမယွင်းပဲကျန်ရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဆူညံသံများ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုများမရှိသဖြင့် အိမ်နီးချင်းများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မှီခိုနေထိုင်နေကြသော သတ္တဝါငယ်များက သင့်အားကျေးဇူးတင်နေပါလိမ့်မည်။
စွမ်းအင်လုံလောက်မှုရှိခြင်း : အလင်းရောင်ရရှိသော်လည်း အပူမဝင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Module များသည် သယ်ယူပို့ဆောင်၍ရသော အဆောက်အအုံများဖြစ်ပြီး မတူညီသောဒေသနှင့် ရာသီဥတုများတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ရလေ့ရှိသောကြောင့် ပူပြင်းသော အပူပိုင်းဒေသ၏ နေ့များမှသည် အေးစက်သော တောင်ပေါ်ဒေသ၏ ရာသီဥတုအထိ နေရာတိုင်းတွင် သက်တောင့် သက်သာအသုံးပြု၍ရစေရန် အပူအအေးထိန်းချုပ်မှုကို အသားပေး ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းတွင် အပူတားဆီးသော စနစ် ၄ ခု အထိပါဝင်ပါသည်။ ရလဒ်အနေနှင့် သဘာဝအလင်းရောင်အလုံအလောက်ရရှိပြီး လေအေးပေးစက်မပါဝင်လျှင်တောင်မှ အလွန်သက်တောင့်သက််သာစွာနေထိုင်နိုင်ပါသည်။
1-အပူကာစနစ် | 2-အပူပြန်သောမျက်နှာပြင်သုတ်ဆေး | 3-အကောင်းဆုံးလေဝင်လေထွက်စနစ် | 4-နေရောင်ဒဏ်ကာကွယ်ရေးစနစ်
၁၀၀% ဝယ်ယူသူဘက်မှ စိတ်တိုင်းကျခဲ့သော အသံလုံအသံသွင်း စတူဒီယိုများကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းပရောဂျက်များတွင်ပါဝင်ခဲ့သော နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်း ဆိုင်ရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ပစ္စည်းများတွင် အခြေခံအနေနှင့် ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူများအား တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ နေထိုင်ရင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
အခြားအသင့်သုံး ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် မတူညီသောအချက်များမှာ Corten စတီးနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ module များအား လုံးဝဖျက်စီး၍မရနိုင်ပါ။ မဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာသော ဧည့်သည်များရန်ကို စိတ်မပူရအောင် ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးများတွင် စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်၍ရသော သံပန်း၊ သံတံခါးများတပ်ဆင်ပေးပါသည်။ သံပန်း၊ သံတံခါးများတပ်ဆင်ရန်ပွိုင့်များအား ဆောက်လုပ်စဉ်ကတည်းက အခြေခံအနေနှင့် ထည့်သွင်းပေးထားသောကြောင့် နောက်ပိုင်းမှသာတပ်ဆင်ချင်သော ဝယ်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ပစ္စည်းများသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသ၊ မြို့တွင်း၊ တောင်ပေါ်ဒေသ နှင့် တောကြီးမျက်မည်းထဲရှိ ကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုပင် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် အလွန်ခိုင်မာသောကြောင့် ငလျှင်ဒဏ်ခိုလှုံရာ အကာအကွယ်အနေနှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြင်ရသည် မမြင်ရသည်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း တစ်ခုချင်းစီတိုင်းသည် ပိုးမွှားရန် နှင့် မှိုတက်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အပူပိုင်းဒေသများတွင်ဖြစ်ကာမူ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရာလွန်စွာနည်းပါးသည်။
စိတ်ချလက်ချ နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါ!